Sida loo akhriyo emaylka Tiscali | Madasha Mobile
Sida loo akhriyo emaylka Tiscali
Cristian Garcia | 27/09/2021 12:39 | Emayllada
Ma isticmaale u tahay Tiscali mail oo miyaad la yaabban tahay sida loo akhriyo emayllada madal Talyaani ah? Waxaa laga yaabaa in ilaa waqti aan fogayn aad isticmaashay boostada Tiscali dhibaato la'aan. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah waa inaad beddeshaa aaladda aad ku akhrin lahayd emayllada oo aad ogaato in wax kasta oo hore loo qaabeeyey aysan hadda joogin. Hadda waxaad u baahan tahay inaad soo ceshato koontadaada oo aad haysato ruckus wanaagsan oo aadan garanayn meel aad ka bilowdo. Waa hagaag taasi waa waxa maqaalkani ku saabsan yahay. Waxaan hubineynaa inaad mar kale akhrin kartid oo aad qori kartid emaylka Tiscali.
Sida loo abuuro emayl ku meel gaar ah oo bilaash ah oo ansax ah
Mudnaanta koowaad, waxa kaliya ee aad u baahan doontaa waa inaad gasho dhammaan qaabeynta aaladda cusub ama dhammaan kuwa aad ku adeegsan doontid Tiscali Mail. Halkaas software -ka aaladda, wax kasta ha ahaadee, waa inuu wax walba sameeyaa iyadoon wax dhibaato ah dhicin. Dhowr ilbidhiqsi gudahood waa in la qaabeeyaa oo waa inaad akhridaa emaylka dhib la'aan. Waxaan u maleyneynaa inaad isticmaasho nidaamyada caadiga ah sidaa darteed waxaan si joogto ah uga hadli doonnaa Windows, Mac OS, Android iyo macruufka.
1 Sida loo akhriyo emaylka Tiscali Mail kombuyuutarkaaga
1.1 Akhri emaylka gudaha Windows 10
1.2 Ka akhriso iimaylada Mac OS
1.3 Ka akhriso iimaylada internetka websaydhka
1.4 Ka akhriso iimaylada macruufka iyo Android
Sida loo akhriyo emaylka Tiscali Mail kombuyuutarkaaga
Taas oo aan ognahay maanta ma heli doontid software gaar ah oo uu Tiscali naqshadeeyay si aad u akhrido emaylkaaga kombuyuutarkaaga. Si aad tan u hesho waa inaad u tagtaa kuwa kale oo aad u yaqaan oo leh macmiil halkaasna waxaad ka akhrisan doontaa wax walba oo aan dhibaato lahayn. Si kasta oo ay tahay, iyo markaan ka hadlayno Tiscali, waxaan kuu sharxi doonnaa sida aad awood ugu yeelan kartid inaad ku akhrido Windows 10 dhib la'aan. Waxaan filaynaa inaad naftaada ka caawin doonto macaamiisha dadka kale, sida Windows 10 app email.
Akhri emaylka gudaha Windows 10
Ma aha mid aad u adag laakiin waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa tallaabooyinka. Sidii aan nidhi, waa inaad isticmaashaa barnaamijka boostada ee Wiwndows 10 oo aad hore ugu rakibtay PC -gaaga. Si aad tan u samayso, tag menu -ka bilowga ee abka oo raadi xisaabaadka maamulaha oo markaad halkaas joogto waa inaad ku darto koonto si aad u furto dhammaan dejinta. Hadda waa inaad gujisaa koonto kale oo aad gelisaa dhammaan macluumaadka laga codsaday goob kasta si aad u buuxiso: emaylka, magacaaga, furaha sirta ah ee aad ku habeysay Tiscali iyo beero kale. Wax khasaare ah ma laha.
Markaad dhammayso samaynta habkan oo dhan waa inaad gujisaa si aad u gasho. Waxaad ka heli doontaa tan xagga hoose ee abka iyo bilowga barnaamijka emaylka ee Windows 10 waa inay kaliya habeysaa Boostadaada Tiscali. Marka howshu dhammaato waa inaad gujisaa oo aad dib u furtaa app -ka boostada. Hadda waxaad bidixda ku haysan doontaa macmiilkaaga Tiscali si aad awood ugu yeelato inaad gujiso oo aad akhrido dhammaan iimaylada yimaadda. Haddii aan la habeyn, waxaa laga yaabaa inay u baahato xuduudaha IMAP.
Ka akhriso iimaylada Mac OS
Haddii, dhanka kale, aad tahay isticmaale Mac OS oo aad rabto inaad ku hagaajiso emaylka Tiscali halkaas, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo. Kama duwana Windows 10 maadaama Apple sidoo kale uu leeyahay barnaamijkiisa boostada oo ay tahay inaad si ficil ah ugu celiso tallaabooyinkii hore. Haddii aadan aqoonin app -ka Mac, asal ahaan waa kan u eg shaambadda xarafka. Waxba iskama beddelin sannadahan oo dhan waana mid ka mid ah kuwa cimriga dheer.
Waa inaad bilowdaa oo aad gasho menu -ka boostada ka dibna sii wad inaad ku darto koonto mar labaad. Markaad samayso talaabadan, waa inaad siisaa koonto kale oo iimayl ka dibna guji badhanka si aad u sii wadato oo aad ugu muujiso emaylkaaga daaqadda laguu furay. Mar labaad waa inaad gelisaa xogtaada: magaca, cinwaanka emailka Tiscali iyo furaha sirta in aad u habayn lahayd. Hadda guji gal oo gal iimayl si barnaamijku u waafajiyo dhammaan xogta aad ku lahayd koontada Tiscali. Si aad u dhammayso, si fudud guji badhanka dhammaynta. Sidan ayaad ku heli doontaa emaylka Tiscali oo lagu hagaajiyay laptop -kaaga Mac Os ama kombiyuutarka desktop.
Sida loo tirtiro emaylka kahor intaan la aqrin
Waxay kaloo dhici kartaa in howshu aysan dhammaan oo qaabeynta otomaatiggu aysan shaqeynin. Taasi waa kiiska ugu xun maadaama ay ku dhacdo Windows 10 iyo dejimaha app -ka boostada. Xaaladdaas waxaad u baahan doontaa inaad gacanta ku habeyso faylka Xuduudaha emailka IMAP taasina waa sheeko kale oo xoogaa dheer.
Ka akhriso iimaylada internetka websaydhka
Dhammaan waxyaalaha kore ma u muuqdaan kuwo aad u dhib badan? Ma doonaysid wax barnaamij iimayl ah kumbiyuutarradaada ama meesha aad rabto inaad aragto boostada? Hagaag markaa waxaan u haynaa xal waxaanad sidoo kale awoodi doontaa inaad ka aqriso Tiscali Mail khadka tooska ah. Waxaad geli kartaa Tiscali webmail oo ka socda biraawsar kasta oo la heli karo kombiyuutarkaaga shakhsi ahaaneed iyada oo aan wax dhibaato ah.
Si aad tan u samayso waa inaad marka hore tagtaa Tiscali Webmail, markaad halkaas joogto waxaa lagaa doonayaa aqoonsigaaga Tiscali, oo ah, magaca isticmaalaha, oo asal ahaan ah waxa ka hor @ tiscali.it iyo furaha sirta ah ee aad ku qaabaysay boostada boostada. Hadda waa inaad gujisaa galitaanka oo taasi waxay ahaan doontaa. Tan waxaad durbaba ku jiri doontaa gudaha Tiscali si aad awood ugu yeelatid inaad akhrido mid kasta oo ka mid ah emayllada aad ku haysato saxaaraddaada wax dhibaato ah. Dabcan, waxaad sidoo kale qori kartaa oo aad qaban kartaa adeeg kasta oo Tiscali leeyahay tan iyo markii aad ku jirto mareegaha.
Ka akhriso iimaylada macruufka iyo Android
Si aannaan marar badan isu soo celcelin, waxaan filaynaa inay haa tahay, mar labaad ma lihin barnaamij Tiscali oo rasmi ah laakiin waxaan ku leenahay barnaamijyo rasmi ah oo boostada ah oo ku jira labada nidaam ee hawlgalka taleefanka gacanta. Sidaa darteed, waa inaad mid kasta ku hagaajisaa emaylka Tiscali. Waa inaad raacdaa isla tallaabooyinkii aad ku samaysay Mac OS iyo Windows 10 barnaamijyada. Ha welwelin maxaa yeelay waxay ku weydiin doonaan isla xogtii ay kaa codsadeen: Tiscali email, password, magac ...
Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani ku anfacay oo wixii hadda ka dambeeya aad wax ku akhrin karto kuna qori karto Tiscali Mail dhib la'aan. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan qaabeynta aaladaha, waxaad ku dhaafi kartaa wax walba sanduuqa faallooyinka si aan kuu akhrino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Emayllada » Sida loo akhriyo emaylka Tiscali
My PC ma aqoonsado Kindle: ogow xalka
Dhammaan jilayaasha Fortnite ee gaarka ah iyo goobtooda